Nkọwa:Okporo Ụzọ Okporo Ụzọ,Mbara Igwe Kwadoro Ogologo Mmiri,Ike nke Mmiri na-ekpuchi ihu igwe
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Okpomọkụ na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala > 30W Anyanwụ na-adabere n&#39;okporo ámá na-enwu ìhè
Ihe Nlereanya.: BB-LD-S-30W
Ụzọ eji eme ka Bbier Street Led Light na-emepụta ya. Udiri nke na-egbuke egbuke jikọtara ya na ogologo oge nke lithium ígwè phosphate batrị na-eme ka anyanwụ a na-enwu ọkụ na-eme ka ihe dị egwu maka ngwa ebe ọkụ eletrik adịghị . Nke a 30w Anyanwụ Kwadoro Motion Ejiri Mmiri Iju Mmiri na-eme ka ụlọ na-anwụ anwụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-eguzogide ọgwụ na-edozi ahụ ma jikọta ya na kọmịlị. Ogo nke 30w na- enye ìhè na ihe mmetụta sensọ nwere ike na-emegharị ma na-akpaghị aka na-enweghị mkpa maka foto foto ọzọ. Akara ìhè 30w nke a bụ IP65 nke e gosiri ma jiri ya rụọ ebe a na-adọba ụgbọala, okporo ụzọ, ebe ntụrụndụ na Walkways.
40W Ogige Osimiri Na-ahụ Maka Ogwe Mpepe Kpọtụrụ ugbu a
40 Watt Anyanwụ na-akwado Ogwe Ọdụm Ogwe Kpọtụrụ ugbu a
50W Epeepe n'èzí na-echekwa ebe ụgbọala Lot Street Lighting Kpọtụrụ ugbu a
Okporo Ụzọ Okporo Ụzọ Mbara Igwe Kwadoro Ogologo Mmiri Ike nke Mmiri na-ekpuchi ihu igwe Okporo Ụzọ Okporo Ụzọ Uhie Ụzọ Okporo Ụzọ Okporo Ụzọ Okporo Ụzọ Okporo Ụzọ Maka Ogige Okporo ụzọ na ìhè okporo ụzọ Okporo Ụzọ Okporo Uhie Ochie